Izicelo Okuhle Ngomsebenzi 'Android ": phezulu best of the best
izicelo Okuhle Ngomsebenzi 'Android "- kuwumqondo omkhulu, ukuqaliswa esihle, ngisho intengo nekhwalithi kwelinye iphakethe. Ngo "GuglPlee" Kukhona izinketho eziningi for thwebula, kodwa lokho bekuyobhekwa njengento enhle ngempela? Lesi sihloko sichaza izicelo kangcono "Android", engatholwa OS mobile kuze kube manje.
Isiqubulo "Spotifay" - "kuyinto umculo kuphi." Nalokhu, yebo, uhlelo lokusebenza olusizayo, ungakwazi ngqo uthumele wonke (noma kuphela kunesidingo) umculo ekhompyutheni yakho ngqo smartphone yakho. Ukufinyelela amakhulu ezinkulungwane albhamu nezingoma etholakalayo ngisho ngaphandle uxhumano World Wide Web.
Ekuqaleni "Spotifay" - IsiSwidi kumasevisi we-intanethi futhi desktop client, kodwa manje ngenxa yokuthandwa kwayo, liye landa kangangokuthi iza ngesimo kwezinhlelo zokusebenza ku PC OS yeselula.
Kubonakala sengathi le ncazelo kwanele kakade ukuqonda ukuthi isicelo kuhle ukuba "Android" akusilo ize kubhekwa uqale nge "Spotifay". Analogs angenza ngazo, futhi babe, kodwa okokuqala onjalo. I ethile kuphela - ngenxa yokuntula a ukukhangisa full-afakiwe futhi kuyodingeka ukuthenga akhawunti premium.
Reader edumile brand "Kindle" liyatholakala "Android". Inzuzo yayo phezu kwezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo - ukuxhumana nesevisi, "Amazon", okuyinto has a inombolo esimangazayo izincwadi ezahlukene. Uma i-akhawunti engekho - akunandaba, ungabhalisa ngokusebenzisa "Kindle". Ukuvuselela njalo yolwazi, esibonakalayo avulekile futhi elula, Kodwa ukuhlinzeka, multi-ukusebenza. izicelo Okuhle Ngomsebenzi 'Android "kufanele abe intengo imali futhi izinga? "Kindle" imahhala, kodwa njengoba omunye the best, ngokuvumelana 'GuglPley ", unjiniyela akufanele kokungabaza.
Uhlelo lokusebenza "Pocket" kulondoloza umsebenzisi kusukela ecabanga lapho ingabe ugcine zonke lezo zihloko nezixhumanisi ukuthi lihlehliselwe "kuze kamuva." Phela, ngempela, akusiyo isimo ngakho ezingavamile uma uhlangabezana i ukuthi isihlokwana ezithakazelisayo, futhi isikhathi sokufunda yonke sihloko okwamanje. Shiya amabhukhimakhi akho, izixhumanisi ngeshumi imiyalezo eyimfihlo ukuxhumana nomphakathi - amateurism, okuyinto iningi ingxenye ukusetshenziswa kancane. Ochwepheshe zonke kubuyise "Pocket".
"Pocket" Ukulayisha izindaba, babahola babayisa engqondweni efundekayo eligcinwe ngesinye isibukezo, ngakho ungakwazi ukuyisebenzisa ngaphandle kwe-inthanethi. Izihloko ngaphezulu "emaphaketheni" (lokhu elihunyushwe lolu hlelo nge ngolimi lwesiNgisi), ungakwazi ukuba sizikhandle ukuhlela bona, kodwa ngokusebenzisa ukuvumelanisa nge ezihlukahlukene amasevisi ukuthumela zonke ayilibalanga "ngoba kamuva 'nge okukodwa in the" Pocket ". Ingabe lo akwanele ekubizeni zokusebenza kuhle "Android", futhi khumbula lokhu "ephaketheni" emangalisayo Ukugunda?
iziphequluli Ezivamile - kunobuciko ezimbi. Yilokho kanye onjiniyela ukucabanga "Layar" bese abadedela enguqulweni yawo isicelo zezindawo World Wide Web - ne ukungathandwa kwabathelisi esikubona ngokoqobo. Lokhu kusho ukuthi manje ubani "Android" kungaba ukhombe ikhamera nganoma iyiphi into bese ukuthola ukwaziswa okunokwethenjelwa mayelana naye. isofthiwe Dutch usebenza ku izingqimba ngawo idatha ilethwa. Zingaba "lendawo" (ie, labo ukuthi umsebenzisi usebenzisa avame) kanye "Popular" (emhlabeni wonke).
"Layar" ifakazela ukuthi izicelo kangcono "Android" kungaba khulula - ngoba lesi siphequluli nje ukuthi. Le nguqulo esemthethweni iyatholakala kwi "GuglPley".
Ukubuyekezwa kwe izicelo kangcono "Android" ukuqhubeka kohlelo "LogMiIn Ignishn", enika ukungena kokukude kukhompyutha yakho ngqo kusuka smartphone yakho. Kuyinto ozimele we-operating system kwi PC - kungaba okungenani "windose" Nokho "Mac". Uxhumano senziwa ngokucindezela inkinobho eyodwa, isiphequluli sewebhu ayidingekile for it. "LogMiIn Ignishn" - isevisi ngokuphelele emangalisayo, esisemqoka labo abadinga ukude libhekele amadeski.
Isicelo godu uvumela ukusebenza ndawonye. Kulaba minuses - toll, kodwa kuyafaneleka ukuba imali.
isicelo "Izingwegwe" isaziso sokuthi ngokwezifiso umsebenzisi ngokwakhe, futhi isofthiwe umxwayisa ukuthi ezithakazelisayo kuye. Isibonelo, lokhu kungaba indlela yokuphuma kwezinkathi zonyaka omusha we-TV uchungechunge zakho ozithandayo, ukuvakasha ekhonsathini ye iqembu lomculo edolobheni lakubo, ukukhululwa kwe-amathoyizi kulindeleke, ukuhlaziya izimo sezulu kanye isaziso isiphepho esizohlasela noma izindaba emakethe lwemali - okukhethwa baningi, futhi onjiniyela "Izingwegwe" njalo ubuyekeza uhlelo lokusebenza kuthinte kakhulu ngisho ukwanelisa izifiso kanye nezidingo inani elikhulayo abasebenzisi. Nge lolu hlelo lokusebenza akunakwenzeka ukuba miss okuthile!
Uma umuntu ngokuzumayo ucela ezinye izinhlelo zokusebenza ezinhle "Android" Bungaba khona okungenani ukunitshela ngaloNkulunkulu uhlu eziyisithupha eziphezulu, kuyoba impendulo efanele. Ziyakwazi kakhulu ngekhwalithi, esiyingqayizivele, futhi ngezinye izikhathi ngisho Irreplaceable. Okungenani, ngokuwalandela kanye, bese kwesokunxele ukuzibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi engaphelele ngakho sebenzisa smartphone yakho phambi.
Indlela yokwenza umsindo orekhodiwe ekhaya
Kanjani ukulondoloza ifayela futhi ukunciphisa umthamo yayo
Inkinga 'Angikwazi iya kusayithi' futhi isixazululo yayo
I "Yandeks.Navigator": ukubuyekezwa, imiyalelo kanye nezici
Indlela ukukhanya endlini ka-Sony Ericsson
Cathedral of St. Mark e-Venice (izithombe)
Indaba kuhlukile inganekwane nezinye izinhlobo etemibhalo